Ukuncokola noCraig Russell. Ukusuka kwiincwadi zakhe, ukufundwa kunye neepanorama zoncwadi. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama
Iincwadi zikaCraig Russell. Ifoto engemva: UJonathan Russell.
Ukuqhubeka naye ukukhala kubabhali basixelele ukufundwa kwabo, namhlanje sinayo UCraig Russell. Umbhali wenoveli ophumeleleyo waseScotland Uphendule ngobubele kuLwesihlanu ophelileyo kwimibuzo yam ngeTwitter kuqala kwaye emva koko, ngakumbi, ngeFacebook.
URussell nguye umdali del ngempumelelo Umgcini uJan Fabel, wamapolisa aseHamburg. Ikwangumnqa kwaye irhabaxa Umcuphi lenox ukusuka kwiGrey Glow engwevu yee-50s.URussell yenye ye Ababhali abalandelayo nabaziwayo bohlobo olumnyama. Ayiloxesha lokuqala ukuba uphendule kubafundi bakho njengam. Ke sijonga umsebenzi wakhe, ufundo lwakho Ezandleni kwaye sihlalutya imeko ethile yokuhlela. Ukusuka apha enkosi kulwalamano lwakho.
Craig Russell wazalwa e 1956 kwingingqi ye UFife, eScotland. Uhlala ngoku, ngokwamazwi akhe, "Entliziyweni yelizwe likaBruce kunye neWallace kwaye ndiziva ndisikelelwe yiyo". Yile nto ayiphenduleyo kum xa evakalisa ukuthanda kwam iScotland kunye nembali ka-King Robert I The Bruce (jonga Intliziyo elikroti). Ukwangumbhali amabali amafutshane.
Njengoko sisitsho, izidalwa zakhe ezidumileyo Bangumkomishinala waseJamani-waseScotland UJan Fabel, uthotho lwazo Iincwadi ezi-7 wahlala e IHamburg iguqulelwe ngaphezulu kwe Iilwimi ezingama-20. Ukudibanisa uthotho, enye ye Lennox, Ijoni laseKhanada langaphambili lajika lalingumcuphi wabucala, elatshintsha naye laba yindawo eyahluke ngokupheleleyo yeGlasgow yama-50s.
Bhala kwakhona ezinye iintlobo zeenoveli (Ebhayibhileni) kunye negama elingelilo UChristopher galt.
1 Uthotho lweJan Fabel
2 Uluhlu lwamagama egama Lennox
3 Ufundo lwakho lwangoku
4 Kwimeko ethile yokupapasha
Uthotho lweJan Fabel
Eyona nto imbi kakhulu, ichanekile kwaye isebenza ngokufanelekileyo uJan Fabel Uye wanyamezela zonke izaqhwithi zababulali ababulalayo, ii-psychopaths ezahlukeneyo kunye ne traumas ezimjikelezileyo. Ukungagungqi kwakhe, ubulumko kunye nokuzola kwezakhono zobunkokeli kunye neqela elihle Phantsi komyalelo wakhe bamenze wathandwa zizigidi zabafundi. Kwaye iimeko zabo zihlala zinefayile enkulu Imvelaphi yezembali kwaye ngokuqinisekileyo Iireferensi zentsomi.
Iinoveli zakhe zilungiselelwe u umabonwakude yi-ARD yaseJamani enkulu impumelelo yabaphulaphuli.
Ukufa eHamburg (Ukhozi lwegazi, 2005)
Ibali lokufa (Mzalwana onwabileyo, 2006)
Resurrección (Ongunaphakade, 2007)
INkosi yeCarnival (Umphathi weCarnival, 2008)
Impindezelo yeValkyrie (Ingoma yeValkyrie, 2009)
Ukoyika amanzi amnyama (Ukoyika Amanzi Amnyama, 2011)
Iziporho zeAltona, 2015 - Ayipapashwa eSpain
Uluhlu lwamagama egama Lennox
U-Lennox, ngokungafaniyo noFabel, ayikho into ethe tye okanye ye-orthodox. Kuyamangalisa ngaphezu kokugxeka le inzima (okanye ayinzima kangako) eyase-Canada yomkhosi ihamba njengentlanzi emanzini emva kwemfazwe iGlasgow ibanda njengoko kumnyama. Phila imihla ngemihla kwaye ujongane ngokufanayo nabahlobo abasuka emapoliseni njengakwimigulukudu ebaluleke esixekweni. Amabali abo nawo ulungelelwaniso olucwangcisiweyo yi-BBC.
Ukwanga kweGlasgow (Ixesha elide leGlasgow, 2010)
Ubuthongo obukhulu obumnyama (Ukulala Ubumnyama obukhulu, 2011)
Amadoda afileyo kunye neentliziyo ezaphukileyo, 2012 - Ayipapashwa eSpain
Ufundo lwakho lwangoku
Oko ndicaphula kwaye ndiguqula:
Okwangoku, ndiyafunda ESierra ephezulu Ngu-WR Burnett. Ndiyithandile inguqulelo yemovie yayo (kunye noHumphrey Bogart) xa ndandisengumntwana kodwa ndandijikeleze nje ukufunda incwadi. Kuyamangalisa okwangoku kwisitayile. Ndikwafunda ikopi engaphambili ye- kunesifo, ngo UMichael Ridpath -Yitroli eyothusayo yaseScotland. URidpath ngumbhali endimthandayo kwaye kunesifo kuye kufuneke abe yeyona nto ayithandayo. Umfazi wam usandula ukundithengela incwadi yamabali amafutshane ngumbhali waseMelika uGeorge Saunders, ke leyo izolandela!
Ngoku ndiyafunda IPhakamileyo yeSierra, Ngu-WR Burnett. Ndiyithandile ingxelo yebhanyabhanya (kunye noHumphrey Bogart) xa ndandisengumntwana kodwa ndandifumana ixesha lokufunda incwadi. Kuyamangalisa okwangoku kwisitayile sayo. Ndikwayifunda ikopi yokujonga kuqala kunesifoNgu-Michael Ridpath, umdlalo obalaseleyo wokuqala waseScotland. URidpath ngumbhali endimthandayo kwaye kunesifo uthembisa ukuba ngowona msebenzi wakhe ubalaseleyo. Umfazi wam usandithengela incwadi yamabali amafutshane aseMelika UGeorge Saunders, ke leyo izolandela.
Kwimeko ethile yokupapasha
Ukuphinda ndikhangele ukuba ingaba ikhona into ayaziyo malunga nesizathu, ndivakalisile Isikhalazo sam malunga nokuphazamiseka kokupapashwa kweencwadi zakhe zamva nje Apha eSpain.
Uphendule watsho ISpain ibisoloko iyimarike ebalulekileyo kuba yena kwaye uyazithanda zonke izinto athe wazenza. Ikwabonakalisile uyavuma ukuba ngumsebenzi ukuba kubekho ukuphazamiseka. Wathetha nge izizathu zobunzima bezoqoqosho ukuba umvakalisi unike ukusuka apha. Kwaye wakhalaza kuba wayengumbhali othembekileyo kubo.
Wongeze ngelakhe iiarhente zikhangela umpapashi omtshakodwa bayayazi ukuba yintoni Kunzima oko papasha uthotho esele lupapashwe ngomnye. Yazibonakalisa ukhathazeke ngakumbi kunomsindo ngenxa yokuba iinoveli zamva nje bobabini uFabel noLennox iphumelele kakhulu. Kodwa bekunjalo ngethemba lokufumana umpapashi omtsha kwaye sinokuba nabo apha, kuba "Omnye wabaphulaphuli abanomdla".
Ngapha koko, lo ibingumzuzu wokubhala wenyanga kum. Ndingumlandeli omkhulu kaRussell kwaye kwakhona ndifuna ukumbulela ngokungeneka kunye nethoni efudumeleyo.. Oku akusoloko kunjalo ngababhali bamanye amazwe okanye belizwe. Kodwa ngokuqinisekileyo uRussell uyathandwa. Kwaye kwabo bangamaziyo uFabel okanye uLennox, bafunde NGOKU.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Ukuncokola noCraig Russell. Ukusuka kwiincwadi zakhe, ukufundwa kunye neepanorama zoncwadi.
Molweni, enkosi ngokusazisa, ndizifundile zonke i-Lennox ezikwiSpanish, ndilinde owokugqibela "Amadoda afileyo kunye neentliziyo ezaphukileyo" ngeSpanish, kunjalo ... Bendingazi ukuba ingxaki kukuba iyafumana umshicileli, ndiyathemba ukuba iza kulungiswa kungekudala.